पढ्नुस् विश्वकै हिंस्रक सहर जहाँ मारिन्छन् सयौँ मानिस ! « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
पढ्नुस् विश्वकै हिंस्रक सहर जहाँ मारिन्छन् सयौँ मानिस !
विश्वका सुन्दर, शान्त, सफा वा यस्तै खालका अनेक सहरबारे हामीले सुन्दै आइरहेका त हौँ । तर सहर त यस्ता पनि छन् जसबारे सुन्दा हामीलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । हो, हालसालै मात्रै सिटिजन काउन्सिल फर पब्लिक सेफ्टी एण्ड जस्टिस (सिसिएसपीजेपी)ले गरेको अध्ययनले विश्वको सबैभन्दा हिंस्रक सहरको सूचना जारी भएको छ । ल्याटिन अमेरिकाका धेरैजसो सहर यसको सूचीमा सूचिकृत छन् । मेक्सिको नागरिक संगठन सिसिएसपीजेपीको रिपोर्टमा यस्ता ५० सहरका बारे बताएको छ ।
यो संगठनले त्यहाँका एकलाख मानिसमाथि हत्याको आंकलन गरेर यो सूची तयार गरेको हो । यी ५० शहरमध्यबाट १७ सहर ब्राजीलका छन् भने मेक्सिकोका ५, भेनेजुएला ३, कोलम्बिया ३ र होण्डुराइसमा २ सहर रहेका छन् । यसका साथै एल् साल्वाडोर, ग्वाटेमाला र पोएर्तो रिकोमा पनि १/१ सहर रहेका छन् । त्यसो त मेक्सिकोमा उत्तर–पश्चिमी प्रान्तको बाहा क्यालिफोर्निया सुकालस काबोस सहरलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा चिनिन्छ । तर यो वर्ष यस सहरलाई दुनियाको सबैभन्दा हिंस्रक देशको सूचीमध्य पहिलो स्थानमा राखिएको छ ।
सिसिएसपिजेपीले तीनलाख जनसंख्या रहेको सहरमा गरेको अध्ययनमा के पाइयो भने, अहिलेको समयमा त्यहाँ हिंसा तीव्र रुपले बढेको छ । एक सालको अवधिभित्र हिंसामा झण्डै पाँचसय प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । सरसर्ती हेर्ने हो भने २०१६ मा त्यहाँ ६१ घटना हत्याका भएका थिए । यस्तै २०१७ मा आएर यो सहरमा ३६५ हत्या भए । मेक्सिकोमा १ लाख व्यक्तिमाथि हत्याको दर करिब एकसय एघार थियो । दुनियाले विकास र समृद्धिका अनेक कुरामा फड्को मारिरहँदा यहाँ भने हिंसामा बृद्धि भएको छ ।
२०१५ को सूचीमा मेक्सिकोका ५ सहर हिंस्रकको सूचीमा थिए । तर यसपटक चाहिँ मेक्सिकोकै १२ सहर रहेका छन् । यसैगरि २०१७ मा आएर दुनियाका शिर्ष १० सहरमध्य ५ सहर म्याक्सिकोका छन् । आखिर मेक्सिकोमा यतिविधि हिंसा हुनुको कारण के त ? सिसिएसपिजेपी संगठन भन्छ-यस देशको वरपर आपराधिक समूहको विरुद्ध लडाँइ गर्ने कुनै रोडम्याप छैन । र यहीँ हिंसाको सबैभन्दा खराब स्तर देखिन्छ ।
सुहागरात मनाउनै लाग्दा विबाहकै रात श्रीमती भागीन्, पतिलाई लठ्यार लाखौँको गहना लुटपाट
काठमाडौँ । विबाहकै दिन श्रीमती भाग्दाको अनुभव कस्तो होला ? सुन्दै अचम्म लाग्ने यो घटना
फोटो खिच्ने चाहनामा यी व्यक्तिले मोले जोखिम, जुन सुन्दा पनि आङ सिरिङ हुन्छ
काठमाडौं । हरेक मानिसको आ–आफ्नै इच्छा र चाहना तथा सौख हुन्छ । तर, कुनै चाहना
बुढाहरुसँग पल्केकी यी युवतीलाई भर्खरका युवक किन मन पर्दैन ? यस्तो छ रोचक कारण
एजेन्सी । इङल्याण्डको इलिङ शहरकी २४ वर्षकी लेक्सी जेकोलाई भर्खरका युवक मन पराउँदिनन् । उनी
किमका बडेमानका नितम्बसहितका कामुक तस्वीरहरु देखेर त्यस्तै हट बन्न खोज्दा ३ सन्तानकी आमाको ज्यान गयो
३ सन्तानकी आमा जसले हट बन्नका लागी इंगल्याण्डबाट टर्की पुगिन् । नितम्बको आकार बढाउने ध्याउन्नमा